Ukuphupha ngeCocoa Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iimpawu ezimnandi nezifudumeleyo zecocoa ziqinisekisa ukuba abantu abaninzi bakufumanisa kuluncedo, kuzolisa kwaye, kwiimeko ezinzima zobomi, kuyathuthuzela. Rhoqo esi siselo sokuzonwabisa sikwanxulunyaniswa nobuntwana bakho, apho kwakumnandi kuso kwaye kuselwa kakhulu.
Kodwa kuthetha ntoni i-cocoa xa amaphupha enziwe ngayo? Anokutolikwa njani amaphupha okunxila okanye ukuzibona usela icocoa?
1 Uphawu lwephupha «cocoa» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «cocoa» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «cocoa» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «cocoa» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokusisiseko i-cocoa luphawu ephupheni. YeNtlalontle. Nangona kunjalo, ukuba uzilungiselela ukulala, oku kunokuba ngumqondiso wokuba awuziva mnandi kwaye ufuna intuthuzelo kunye nobushushu.
Ukusela icocoa engenaswekile nokuba krakra nako kunokuba sisibhengezo ephupheni. amaxesha anzima zibandakanya. Abo bachaphazelekayo baya kujongana neengxaki ezininzi kwixa elizayo kwaye imiba ethile yobomi babo bemihla ngemihla isenokungabi nabulungisa. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uzame ukuba ungaphoxeki ngokukhawuleza kwaye wamkele iimeko zakho zokuphila ngoku. Ukuzisizela kakhulu, nokuba kufanelekile ngokwamava, akusayi kukuqhubela phambili.
Ikomityi yecocoa enemarshmallows encinci ihlala izisa ixesha elihle kunye nentuthuzelo enjengephupha.
Ukuba i-cocoa enxilileyo ephupheni ishushu ngakumbi, oku kuthetha, ngokoluvo ngokubanzi, ukuba umntu ochaphazelekayo akufuneki athandabuze kakhulu kwiimeko ezithile. Abanye abayi kuza kunceda kule meko; Endaweni yokuba umntu abandakanyeke ekusombululeni iingxaki ezithile. isenzo esikhawulezayo Ndiyabuza.
Kwakhona, ukubona omnye umntu esela i-cocoa kunokubonwa njengophawu lokuba iphupha liceba ukuhlekisa ngommelwane. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ucinge kube kanye ukuba lo mntu ufanelekile.
Uphawu lwephupha «cocoa» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwezinye iingcali zengqondo, iimeko apho i-cocoa yayinxila ephupheni ibaluleke kakhulu. Oku kunokunika ukuqonda malunga nentlonipho apho iphupha linokujonga iimeko ezithile emva kwexesha kunye nezinto ezahlukeneyo. Ukhutshiwe libala. Ngokwenkcazo yengqondo yophawu lwephupha, unobangela woku uhlala ulangazelela ulonwabo nothando olunzulu.
Mhlawumbi umntu ekuthethwa ngaye unqwenela kakhulu ukulukuhla kwaye sele enamava Amava enkanuko buyela komnye umntu ozixokisa malunga nesigulo esithile. Ngaba yonke into ibingenangxaki nalo mntu emva kwayo yonke loo nto?
Kule meko, uphawu lwephupha lunokuhlala luphawu olunzulu. melancoly lomntu ochaphazelekayo.
Uphawu lwephupha «cocoa» - ukutolika kokomoya
Ngengqiqo yokomoya, icocoa ephupheni luphawu lomntu impilo. Nangona kunjalo, ukuba kukrakra kakhulu, oku kuyasebenza nakweli nqanaba. amava angathandekiyo.